Warbixin : Somaliland Oo Hoy U Noqotay Abaar Daran , Sarif Barar Iyo Sixiroolayaal Bulshada Qafaasha By: Saciid Cagjar
Gobollada Bariga Saaxil,Togdheer,Sool,Buuhoodle,Sanaag iyo Badhan, ayaa ah gobollada dadka ku nool ee reer miyiga ahi ay halista ugu jiraan in ay ku baxaan abaarta ku habsatay ee dalka oo dhan ka jirta, taasoo inta badan gobollada bari xoolihii ku noolaa ay ku le’deen abaartan oo noqonaysa tii ugu xumayd ee muddo dheer soo marta dalkan. Waxaa soo baxaaya warar sheegayaa in todoba qof ay u dhinteen 72 saacadood ee laga soo gudbay , Bulshada Somaliland ayaa is waydinayaa halka ay ku danbeyeen guddidii taakulaynta abaaraha oo aan bulshada waxba gaadhsin balse ay jiraan malaayin doolar iyo raashin tiro badan oo lasoo gaadhsiyey guddida baaraha Somaliland ee hoggaamiyaha u yahay Madaxweyne ku xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil (Saylici).
“Waxaan haystaa siddeeed carruur ah ilmaha ugu weyni waa 16 sanno jir, waxaana ugu yaraa ilmaha toban bilood jiray oo naqafo darro u dhintay. waxaan u waayey caano xoolaad iyo kuwa naaskaba. carruurta kale waa ay wada jiifaan waxaa ugu culus gabadh 15 sanno jir ah iyada oo sakaarad ah ayaa layga qaaday waxaa la geeyey Laascanood, miyir ma qabo muddo 17 cisho ah.” Ayey tidhi Hooyo Somalilander ah oo ku sugan deegaanka Cagallaaye ee gobolka Sool .
Dadweynaha caasimadda Somaliland ee Hargeysa ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay kor u kaca qiimaha Dollarka oo ay tilmaameen in uu yahay wax sharci darro ah oo aan u hoggaansamin go’aamadii ka soo baxay xukuumadda Somaliland oo aan inta badan fulin ,waxaa garab socda sicir barar baahsan oo ku habsaday bulshadda Somaliland kaas oo ay ugu wacan kor u kac doolarka , abaarta iyo qorshe la’aanta Xukumadda Madaxweyne Silaanyo . “Sicir bararkan waxaan u aragnaa laf-jab ku yimi bulshada Somaliland , waxaanu ka codsanaynaa Xukumaddayada in ay shaqo degdeg ah oo ka daacad ah ay ka qabato oo go’aankeedi hore ay ku adkaysato.” Ayuu yidhi Cabdiraxmaan Sidci oo ka mid ah dhalinayaradda magaalada hargeysa .
Raxma Cabdi Maxamed oo ka mid ah haweenka ay qafaasheen dadka wax sixra ayaa ka sheekaysay sidaay wax u dhaceen “Waxaannu fuulay gaadhi Noah ah oo ay saaran yihiin qof dumara iyo afar nin, intaas ka dibna guri ayay I geeyeen oo waxa ay fureen mid ka mida qolalkii guriga, waxaana guriga ugu tagay oo ku jiray laba hablood oo koomo ku jiray islamarkana miyirkoodu maqanaa, kaanoolena ku xidhan yahay, anigana way I fadhiisiyeen oo dhiiga ayay iga qaadeen.” Ayey tidhi iyada oo hadalku dhib ku yahay
Qalinka : Wariye Saciid Cagjar